आज उपत्यकाको सुरक्षा ब्यबस्थापन कडा? पाँच सय प्रहरी परिचालन, यस्तो छ ट्राफिक व्यवस्थापन - हातेमालो डेली
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको आजदेखि सुरु हुन लागेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन एवं आठौं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था क’डा पा’रे’को छ । उपत्यकाको सुरक्षा हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीले शुक्रबारबाटै माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरक्षा बढाएको छ ।
Previous articleकहाँ बाट आए शनि तामाङ ? जस्ले काठमाण्डौमा घटाए डरलाग्दो घटना !
Next articleत्यो समय उसलाई भेटेको भए की उसको ज्यान लिने थिएँ की मेरो भन्दै रबिना मिडियामा